Ukupakishwa kweMveliso kuchaphazela njani amava oMthengi | Martech Zone
Usuku endathenga ngalo iMacBook Pro yam yokuqala yayiyinto ekhethekileyo. Ndiyakhumbula ndiziva ukuba ibhokisi yakhiwe kakuhle kangakanani, ukuba ilaptop iboniswe kakuhle, indawo yezixhobo… konke kwenzelwe amava okhethekileyo. Ndiyaqhubeka nokucinga ukuba iApple inezinye zezona mveliso zibalaseleyo zokupakisha kwimarike.
Ngalo lonke ixesha ndithumela ngaphandle naziphi na izixhobo zabo, yinto amava. Ngapha koko, kakhulu kangangokuba ndihlala ndiziva ndonakele xa ndigcina iibhokisi okanye ndizilahlile. Thelekisa oko nezo zinto zinamandla zokufaka itywina elifuna ikhithi yoncedo lokuqala kunye nezikere ze-titanium… ndicaphukile ngaphambi kokuba ndide ndiyivelise imveliso kwiphakheji!
Imbonakalo yokuqala yayo nayiphi na imveliso kumthengi kukupakisha, kunokwenzeka ukuba basekele ulindelo lwabo kwimveliso kwimbonakalo yokupakishwa, ke ukuyifumana ilungile kuyimfuneko! Singathanda ukwazi ukuba abathengi bayazithenga ngokusekwe kumgangatho wemveliso, kodwa siya kuba sixoka, uyilo lokupakisha lubonwa ludlala indima enkulu kwisigqibo sabo. Isisombululo sePakethe ngokuthe ngqo, Inzululwazi yokuPakisha ngokuBalaseleyo
Ngokwengqondo, ukupakisha kungalitshintsha ngokupheleleyo lonke ulwazi lwabathengi ngesixhobo. Kule inforgraphic, isisombululo ngokuthe ngqo sePakethe siyacacisa:
Imizwa Iimvakalelo zidlala indima ebalulekileyo kuwo onke amava emveliso, aqala kanye emva kokuba abathengi befumene imveliso ezandleni.
uluvo -Uphononongo lubonisa ukuba iinkcukacha zokupakisha zinceda umntu ukuba abone ukuba imveliso izakuba njani. Kwaye ekuboneni kokuqala kwemveliso, ingqondo igqiba ukuba iyathandeka okanye ayimnandanga.
Sisebenza kunye nenkampani okwangoku ezisa izinto zokuzonwabisa kwiimarike. Sisebenza kumdlalo wamanqindi, izixhobo zangaphakathi, isipho esingalindelekanga, kunye nombulelo obhalwe ngesandla kumqambi. Injongo yethu kukwenza ukuba umthengi azive ekhethekileyo ngaphambi kokuba bathathe kwaye basebenzise eyona mveliso. Sikwasebenza kwindlela esinokongeza ngayo ivumba langaphakathi ebhokisini ukuze sizise amava ekhaya.
Inzululwazi yokuPakisha ngokuBalaseleyo
tags: Ukunyuswa kwemveliso yezithambisoukupakisha okululaimveliso yobunewunewuukupakishaUkupakisha okutshaulwazi lwemveliso yophawuUphawu lwemvelisoUkuchongwa kwemvelisoukuthengisa imvelisoUkupakishwa kwemvelisoukukhuthaza imvelisoIipakethe ezinokuphinda zisebenze kwakhona